कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् ज्येष्ठ ३ गतेको राशिफल « Dhankuta Khabar
समय : 11:13 PM
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल ज्येष्ठ ३ गते शुक्रबार इश्वी सन् २०१९ मे १७ तारीख वैशाख शुक्लपक्ष त्रयोदशी तिथी ५ः३९ बजे सम्म पश्चात चतुर्दशी तिथी स्वाती नक्षत्र व्यतीपात योग गर करण चन्द्रमा तुला राशिमा आनन्दादि योगमा गद योग सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु विश्व दूरसञ्चार दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, नृसिंह जयन्ती, स्याङ्जा लसर्घामा आलमदेवीपूजा – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
मनोरञ्जनका साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । पारीवारिक साथ सहयोगमा जटिल कार्य हरु सम्पादित रहनेछन । नयाँ कार्यको प्रारम्भको सम्भाबना रहनेछ । सभा सम्मेलनमा सहभागीताको योग रहेकोछ ।
आफन्तजनहरुको साथ सहयोमा पुराना लगानी उठाउन बिशेष मद्दत पुग्नेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । देश बिदेशको यात्राको राम्रो योग रहेकोछ । नजिकका मित्रनज तथा दाजुभाई हरुकोको पुर्ण बिश्वासमा नपरेकै बेश हुनेछ ।
रचनात्मक कार्य तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानीका दीर्घकालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेको छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
कर्कट राशि- हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो
स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । आम्दानि मध्यम रहने समय रहेकोछ ।
बल तथा प्रराक्रमका बृद्धिहुने योग रहेकोछ । नयाँ मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा ब्यवधान उत्पन्न गराउनेहरुको बृद्धिहुनेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय अन्य ब्यतिहरुले प्राप्त गर्नेछन ।
स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । अनावश्यक क्षेत्रमा खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यतिहरुबाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले प्रतिश्पर्दि शुभचिन्तक बन्नेछन ।
गरीरहेको कार्यमा सामान्य ढिलाई रहेता पनि कार्य सम्पादित भने हुनेनैछ । ब्यापार ब्यवसायमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्नहुन सक्नेछ । तात्कालिन आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । भोगबिलासमा समय ब्यतित रहनेछ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथसहयोग प्राप्त रहनेछ ।
बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तमरहेकोछ । आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ । आम्दानिका बिभीन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । खानपानमा साबधानि उत्तम रहनेछ ।
सामाजिक कार्यमा जुट्नेसमय रहेकोछ । सभासम्मेलनजन्य कार्यमा सामान्य मानसम्मानको प्राप्ती हुनेछ । मान्यजनहरुको स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सबारी साधन तथा भौतिक साधनको प्रायोगमा साबधानि अपनाउनु होला ।
धार्मीक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । मित्र तथा दाजुभाईहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुद्वारा गरीएको कार्य त्रुटिका कारण तपाईलाई सामान्य तनाव आईपर्न सक्नेछ ।
बिश्वासिला ब्यत्तित्वहरुबाट धोकाहुनसक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीका कारण आफन्त जनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाद बिवादको झमेलाले सताउला ।